वीरगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मी र मास टेस्टटीङ गराएका सर्वसाधारणसहित थप ४६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि - Yatra Daily
Home Headline वीरगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मी र मास टेस्टटीङ गराएका सर्वसाधारणसहित थप ४६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण...
वीरगञ्जमा स्वास्थ्यकर्मी र मास टेस्टटीङ गराएका सर्वसाधारणसहित थप ४६ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
वीरगञ्ज १५ श्रावन । पर्सामा थप ४६ व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । पछिल्लो समय नारायणी अस्पतालको पीसी आरे ल्याबमा गरिएको विभिन्न व्यक्तिको स्वाब परीक्षणमा ४६ व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएका नयाँ सङ्क्रमितमा ११ महिला रहेका छन् र उनीहरू १८ वर्षदेखि ७५ वर्ष उमेर समुहका रहेका छन् ।
पर्सा, बारा, रौतहटका बासिन्दा भएतापनि सबै वीरगञ्जकै विभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. मदन कुमार उपाध्यायले बताए ।
थपिएका सङ्क्रमितमा नारायणी अस्प्तालमा कार्यरत दुई अर्थोपेडिक डाक्टर र अन्तै काम गर्ने एक जना डाक्टर गरी तीन जना डाक्टर कोरोना देखिएको छ ।
नारायणीका ४४ र ४० वर्षको पुरुष अर्थोपेडिक डाक्टर र वीरगञ्जकै एक जना ३६ वर्षीय डाक्टर पनि संक्रमित भएका डा. उपाध्यायले बताए ।
त्यसैगरी,नारायणी र एडभान्स हस्पिटलका ६ जना स्टाफ नर्सहरु संक्रमित भएका छन्।
वीरगञ्जको विभिन्न वडामा मास ट्रेसीटीङ गराएका केही सर्वसधरणमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
नारायणीको मेडिकल वार्डमा खटिने ४० वर्षकी स्टाफ नर्स, आइसियु कक्षामा खटिने २० र २४ वर्षका स्टाफ नर्समा कोरोना पुष्टि भएको छ भने नारायणी अस्पतालमै डायायलोसिस गराउने पर्सा पोखरीया १ की ७५ वर्षीया महिला, बारा, निजगढका ६५ वर्षिय पुरुष र बारा जितपुरका २४ वर्षीया महिला मृगौला रोगीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
त्यसैगरी, बाराको नितनपुरमा रहेको म्याग्नस फर्मा प्रालि (औषधी उद्योग)मा कार्यरत तीन मजदुर र लोटस फर्मा वीरगञ्ज २ छपकैयाका एक जना गरी कुल ४ जना मजदुरहरुमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ।
म्यागनसका मजदुरहरुमा रौतहट, राजपुर ५ घर भएका ३७ वर्षका पुरुष, पर्सा, बहुदरमाई नगरपालिका ४ नगरदाहाका ४४ वर्षीय पुरुष र वीरगञ्ज १२ मुर्लीकी २६ वर्षीया महिला मजदुरमा कोरोना पुष्टि भएको छ।
यता लोटस फर्माका वीरगञ्ज ५ रेशमकोठी बस्ने ६० वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ।
त्यसैगरी वीरगञ्ज १४ का ६५ वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज ११ का ४१ वर्षीय पुरुष, वीरगञ्ज १४ कै ३० वर्षिय पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नारायणी अस्पताल ल्याबले जनाएको छ। वीरगञ्जका अन्य वडाका संक्रमितहरु पनि रहेका छन्।
Previous articleवीरगञ्जमा थप २ को कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु
Next articleकैदीबन्दीलाई कोरोना लागेपछि वीरगञ्‍ज कारागार ‘सिल’